Halls of Origination Guide ho an'ny mahery fo sy mahazatra | Cataclysm, tranomaizina | WoW Guides | WoW Guides
Halls of Origination / Halls of Origination Originaly ary Torolàlana Ara-dalàna
ny Chambers of Origins dia trano fikarohana ao Uldum. Toa an'i Uldaman sy Ulduar, dia nampiasain'ny Titans taloha ela be. Saingy, tsy toy ireo roa ireo, ny tanjon'ny Uldum dia tsy ny ho fonja fa ny laboratoara amin'ny famoronana hazakazaka vaovao. Iray amin'ireo hazakazaka vaovao ireo ny Tol'vir, mifangaro olona sy saka, izay miaraka amintsika ao anaty trano-maizina toa ny The Lost City of the Tol'vir na Pinnacle of the Vortex.
Ao amin'ity tranomaizina ity ho an'ny ambaratonga 84-85 dia hahita fihaonana 7 amin'ny faharesena isika, ao amin'ny halalin'ny tany efitra iray izay nafenina tsy ho hitan'ny masontsika hatry ny ela.
Efitrano fidirana fiaviana
Mpiambina ny Tempoly Anhuur / Mpiambina ny Tempoly Anhuur
fahasalamana: 1,659,880 - 3,319,760
Sorompanavotana masina: Mitroka 14250 ka hatramin'ny 15750/42750 ka hatramin'ny 47250 p. fahasalaman'ny lasibatra sy ny fahavalo akaiky ao anatin'ny 15 metatra afaka 8 segondra.
Fihirana maneno: Ny Guardian dia mihira fihirana manindrona izay miteraka fahasimbana masina 300 ho an'ny mpilalao fahavalo rehetra tazana isaky ny fatra.
Ampinga maivana: Tsy afa-manoatra i Anhuur.
Ny Guardian of the Anhuur Temple dia mpanara-maso ny Chamber of Prophecy ary tompon'ny majika masina, mpihira Fihirana mahery. Ity fivoriana ity dia mitaky fandrindrana lehibe hanatanterahana azy. Mandritra ny ady dia hamoaka taratra afo tsy maintsy hialantsika ireo sarivongana ao amin'ny efitrano.
Anhuur hampiasa Sorompanavotana masina momba ireo mpikambana ao amin'ny tarika sendra. Rehefa afaka 8 segondra dia hipoaka ity ozona ity, tsy ny olona voakasik'izany ihany fa ny olona rehetra ao anatin'ny 15 metatra no hanimba. Ary koa, ny mpilalao tsirairay dia voan'ny fahaizany hositranina mankany Anhuur noho ny vola simba. Raha tsy miala lavitra amin'ilay mpilalao voakasik'izany isika dia hiady aminy lava kokoa noho ny ilaina ary mety hahita olana amin'ny mana isika.
Amin'ny farany, hampiasa ny Guardian'ny Tempoly Ampinga maivana mahatonga ny tenany tsy ho voan'ny fahasimbana. Mandritra izany fotoana izany dia hanomboka hihira a Fihirana maneno izay mamela vokany fitomboana. Hanangona bebe kokoa izany amin'ny fotoana lava andefasanao ny fihirana. Amin'ny voalohany dia kely dia kely ny fahasimbana nefa avy eo lasa olana.
Mba hamonoana ny ampinga dia tsy maintsy miditra ao an-davaka isika ary manindry ny jiro roa. Mora ve? Tsia tsia! Misy bibilava! Ireo bibilava dia tsy mahafaty loatra ka ny tanky dia afaka misambotra azy ireo raha misy DPS mamadika ny switch.
Vantany vao vita ny ampinga, tsy maintsy manapaka ianao an'i Anhuur hitsahatra tsy hihira ny hirany ary hanohy handratra azy. Ny ampinga dia hivezivezy indray mandeha indraindray mandra-pahatapitry ny azy.
Amin'ny maody mahery fo dia mahafaty tokoa ireo bibilava any an-davaka ka tsy mandeha ny tetika etsy ambony. Mba hiatrehana azy ireo dia manana fomba roa isika.
Ny fomba iray dia ny fampiakarana ny vondrona iray manontolo amin'ny lafiny iray ary atsimbadiho ny switch iray isaky ny mandeha. Ataovy ao an-tsaina fa tsy mila miantso bibilava rehetra ianao. Raha vantany vao manana ny tanky ny SPD dia azo tapesina amin'ny rindrina hampavitrika ireo switch. Raha mitazona tsara ny tanky dia azonao atao ny misintona ireo bibilava mankany amin'ny ampahany manaraka mba hitehirizana fotoana kely, ka hisorohana ny vokatr'izany Fihirana maneno. Ity fomba ity dia azo antoka kokoa nefa maharitra kokoa.
Ny fomba hafa dia ny fananana ny tanky ary ny DPS iray mankany amin'ny lafiny iray ary ny DPS roa mankany amin'ny iray hafa raha mbola mijanona eo amin'ny tetezana kosa ilay mpitsabo manasitrana izay miditra ao an-davaka. Ny tanky dia tokony hatao amin'ny bibilava 3/4 ary ny DPS dia tokony hisarika ny bibilava any an-dafiny, hitarika azy ireo ho amin'ny tetezana hitazoman'ny tanky. Ity fomba ity dia mampidi-doza kokoa nefa mamonjy fotoana be dia be.
Earthrager Ptah / Earthrager Ptah
fahasalamana: 1,659,880 - 4,564,670
Fivoahan'ny lelafo: Atsipazo etsy sy eroa ny flame Bolts, miteraka fahavoazana 7,875 hatramin'ny 10,125.
Crush tezitra: Miteraka 100% / 150% fahavoazana ara-dalàna eo amin'ny fahavalo sy ny mpiara-dia aminy akaiky. Misy vokany hatramin'ny tanjona telo.
Ny Terracundo Path dia hita ao amin'ny Fasan'i Terracundo. Andriana tsy voatery atao izany ka tsy mila. Na dia tsy sarotra loatra aza ny ady, Terracund dia be ny fahasimbana ao anatin'ny fotoana fohy, izay mety hahatonga ny mpitsabo ho lany hery.
Ny modely dia hitovy amin'i Lord Marrow sy ny azy Crush tezitra, dia mitovy amin'ny an'ity. Ny tank dia tsy maintsy mampiala azy amin'ny vondrona ary ny melee DPS dia tsy maintsy apetraka eo an-damosiny raha tsy te-hanimba izy ireo. Safidy iray hafa ny fanangonana ireo mpikambana rehetra eo akaikin'ny tank, hizara ny fahasimbana amin'ireo telo na dia tsy voatery atao izany.
Ny fahaizana mampidi-doza indrindra dia Fivoahan'ny lelafo. Hanomboka handrehitra afo izay hamely ny mpikamban'ny antoko manao fahavoazana be isan-tsegondra. Fahasimbana be dia be izany ka izay karazana fahaizana manokana mampihena ny fahasimbana na mampitombo ny fanasitranana dia tokony hampiasaina hanampiana ilay mpitsabo. Araka ny ho hitanao, ny ady dia hazakazaka DPS satria raha mitranga matetika loatra izany Fivoahan'ny lelafo, ho hitanao fa ho lany mana ny mpanasitrana.
Amin'ny 50%, hitresaka i Ptah ary hihetsiketsika ny Scarabs tsy miankina Elite 6 ary ny horohoro Elites 2. Mila maka azy ireo haingana ny tanky, indrindra ireo sangany satria afaka mamoaka DPS na Mpanasitrana indray mandeha izy ireo. Mandritra io "dingana" kely io dia hiseho eo amin'ny tany ny hazondamosin'ny fasika. Mialà mba hisorohana ny fahasimbana ara-potoana sy ny fihemorana vokatr'izany.
Maty ireo bibikely, hanangana indray i Ptah ary hovonointsika haingana araka izay azo atao izy mba hisorohana ny iray aminy Fivoahan'ny lelafo.
fahasalamana: 2,074,850 - 5,394,610
Manamboatra alfa ianao: Ny zana-kazo Alpha Alpha manohitra lasibatra tampoka, miatrika fahavoazana 9,750-10,250 amin'ireo fahavalo ambonin'ny faritra isaky ny 0.5 segondra mandritra ny 3 segondra.
Fandravana potika: Mampihena ny fahasalamana ambony indrindra amin'ny 8% / 10%. Mitsivalana hatramin'ny in-10.
Fifanarahana fandringanana: Nentina nampiorina ny fotokevitra fandringanana ary hamotika ireo endrika fiainana manodidina rehetra.
Fitokonana Nemesis: Manimba 75% ny fahasimban'ny fitaovam-piadiana eo noho eo ary avy eo 5,850-6,150 bonus Shadow isa isaky ny 2 segondra mandritra ny 10 segondra.
Fihetsika Omega: Manome fahasimbana isa 5,000 8 isaky ny segondra mandritra ny XNUMX segondra. Manaitra ny fahavalo rehetra ao amin'ilay faritra.
Anraphet dia sefo izay ho hitantsika ao amin'ny Chambre of jiro. Mba hahitana izany dia ho hitantsika ny fomba hanokafan'i Brann Bronzebeard varavarana ho antsika ary tsy ho ela isika dia voatery hanimba bosoa mini-singa efatra izay tena tsotra.
Manana quirk ity boss ity. Tonga ny fotoana, noho ny Fandravana potika, ho lany ny fahasalamantsika. Hipetraka io fahaiza-manao io ary ho avy ny fotoana hamonoana antsika amin'ny kapoka tokana.
Tokony mailo ny vondrona Manamboatra alfa ianao Hihombo tampoka amin'ireo mpilalao izy io satria mamela faritra mainty eo amin'ny tany izay tsy maintsy hivoahantsika raha tsy te-hanana fahavoazana ampy isika.
Ny ampahany ratsy indrindra, tsy isalasalana, dia ny Fihetsika Omega hihetsika isa-minitra izany. Ho hitantsika ny fomba manomboka milatsaka eo amin'ny lohantsika ny aloka, manimba ny olona rehetra isaky ny segondra mandritra ny 8 segondra. Izy io dia fahasimbana tsy azo ihodivirana (na dia azo tanterahina aza) ary ny mpitsabo dia tokony hikarakara ny fanasitranana azy.
fahasalamana: 1,659,880 - 3,734,730
Mipoaka: Isiset dia nandefa supernova iray, nahatonga ny fahavalo rehetra nanatrika azy naka 18,525 hatramin'ny 20,475 teboka simba Arcane ary nirenireny an-jambany nandritra ny 4 segondra.
Orana astral: Miantso ny fanampian'ny orana astral i Isiset.
Antso any an-danitra: Isiset miantso ny fanampian'ny olom-pantatra selestialy.
Voaly an'ny lanitra: Miantso ny fanampian'ny voaly avy any an-danitra i Isiset.
Isiset no Assemblage of majika. Izy dia manana fahaizana antsoina hoe Supernova izay miasa tena mitovy amin'ny famirapiratan'i Eadric the Pure amin'ny fitsapana ny Tompondaka. Ny mpilalao dia tsy maintsy mihodina ary manalavitra azy ireo mba hialana amin'ny fahasimbana (sy ny setroka) aterak'izy ireo.
Amin'ny fahasalamana 60%, Isiset dia hizara ho kely kely telo ny tenany. Ireo dia:
Orana astral: Fampiantsoana kintana amin'ny fandroana kintana amin'ny alàlan'ny fikapohana azy intelo.
Voaly an'ny lanitra: Mametraka sakana fiarovana amin'ny Isiset ary maneho ny isan-jaton'ny ody amin'ny mpilalao.
Antso any an-danitra: Miantso olom-pantatry ny lanitra izay mifandraika amin'ny fahasimban'ireo mpikambana sendra ao amin'ilay vondrona miaraka amin'ny fotoana itrangan'ny laser izay tsy maintsy hafindra manodidina ny efitrano (fomba Kologarn) mba tsy hahatafiditra ireo mpilalao.
Rehefa maty ny iray amin'ireto kinova ireto dia tsy hanana fahaizana mifanentana amin'ilay Aspect izay resintsika fotsiny i Isiset, fa ny fahaiza-manao sisa kosa dia hihamatanjaka.
matetika, Antso any an-danitra Izy io no tokony ho voalohany satria ialantsika ny fisehoan'ny Famoronana Selestialy izay tsy maintsy resy. Raha vantany vao resy ity Aspect ity dia hiaraka hiaraka amin'i Isiset ny roa ambara-pahatapitray hampihena ny fahasalaman'izy ireo hatramin'ny 30% izay hisaraka indray.
Amin'ity tranga ity dia hifidy izahay Orana astral noho ny mahasosotra indrindra. Rehefa sitrana ny vatanao rehefa maty ny Orana dia hanana ianao ampinga Mitroka teboka 300,000 amin'ny fahavoazana izy ary taratry ny 60% amin'ny ody nazerantsika azy io. Soa ihany, io tsipelina io dia azo esorina amin'i Isiset, ka mahatonga ny ady mivantana mahitsy manomboka izao.
fahasalamana: 1,659,880 - 2,904,790
maina: Mampihena ny fanafihan'ny mpilalao sy ny haingam-pandosany 60% ary mampihena ny hetsik'izy ireo amin'ny 60%. Maharitra 10 segondra.
Manjifa hery lehibe: Mandany ny fiainana sy ny angovo amin'ny alàlan'ny fahazoana angovo tena lehibe.
Fampiroboroboana tampoka: Ammunae dia mamoaka ny herin'ny fiainany rehetra, mamelona ny poding rehetra manakaiky, 23,125 26,875 sy XNUMX / 29,600 sy 34,400 Manimba ny natiora rehetra ny fahavalo.
Ammunae no fiangonan'ny fiainana. Mahitsy ny ady raha mbola mitandrina ny zava-mitranga ny mpilalao. Ho hitantsika izao ny antony.
Mandritra ny ady dia hisy ny Cutting Pods izay hipoitra eo ambanin'ny tongotr'i Ammunae, hanasitrana azy amin'ny 1% amin'ny fahasalamany tanteraka isaky ny 3 segondra ary afaka hipetraka. Ny DPS dia tsy maintsy mamono azy ireo raha vantany vao mahita azy ireo miseho.
Raha sendra hadinontsika ny momba azy ireo (ankoatry ny hanasitranan'i Ammunae ny tenany) dia hitombo izy ireo ho lasa Voninkazo Bloodpetal. Ireo dia manimba be ny rà amin'ny mpilalao ka raha mipoitra izy ireo dia izy ireo no hataontsika lohalaharana.
Ankoatry ny zavamaniry, Ammunae dia manana ny fahaizany manokana. Hampiasa maina momba ny mpilalao sendra. Azo esorina izy io satria vokany majika io.
Ary koa, ary ny tena zava-dehibe kokoa, dia hampiasainao Manjifa hery lehibe amin'ny mpilalao ary hanomboka handao ny herin'ny fiainana. Ankoatry ny fahavoazana vitany dia hameno 30 isa ny herin'ny herinao. Rehefa manana ny bikan'ny herinao ianao dia Fampiroboroboana tampoka, mipoaka ary manao fahasimbana kely. Soso-kevitra ny hampiasa fahaizana manasitrana manokana toy ny Tree of Life amin'izao fotoana izao.
Amin'ny maody mahery fo, miseho indraindray ny spores. Ireo dia mahatratra 12,000 isa ny fahasimbana ho an'ny mpilalao rehetra manodidina. Rehefa maty izy ireo dia hamela spores manimba, izay hanimba misy na inona na inona eo amin'izy ireo. Mety napetraka tao aminy ny tanky nanafaingana ny fahafatesan'i Ammunae sy ireo zavamaniry rehetra.
Fivoahana korontana: Mandrotsaka korontana amin'ny fahavalo izay mahatratra 7,929-10,071 / 10,774-13,559 teboka amin'ny fahasimbana Chaos izay tsy azo toherina ary mamakivaky ny vokatra azo tsentsina rehetra.
Setesh no fananganana korontana. Tsy toy ny boss hafa, tsy azo alefa tanky izy io fa ny tank kosa dia tsy tokony hampiasa ny specialisation DPS satria tsy maintsy hasiana tanky mandritra ny tolona.
Hanomboka i Ammunae Fivoahana korontana amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona tsy misy fangarony. Io fahasimbana io dia tsy azo toherina na hamafisina amin'ny fomba hafa ka tsy maintsy hositranin'ny Mpanasitrana.
Setesh dia hanomboka hifindra amin'ny ilany havia amin'ny efitrano ary hanokatra Portal of Chaos isaky ny 25 segondra. Ireo dia hiteraka andiana monster izay tokony hikarakara ny tank. Void Sentinel, 10 segondra taty aoriana dia Void Seeker, ary farany dia 2 Void Worms.
Na dia azo tsinontsinoavina tanteraka aza izy ireo ary miompana amin'ny Setesh fotsiny, dia tsara ny hamono azy ireo, indrindra ireo Void Seekers satria manana Anti-Magic Shield izy ireo izay hisorohana ny mpilalao iray tsy ho sitrana nefa mbola hanimba ny volon'i Setesh. Ankoatr'izay dia tsy dia salama loatra izy ireo na tsy manisy ratsy firy.
Setesh koa dia mampiasa fahaiza-manao roa hafa izay tsy voatanisa. Hamoaka aloka vitsivitsy izay hipoaka rehefa mianjera (tadidin'izy ireo ny Faceless ao Ahn'Kahet) nefa koa, mamela faritra mainty amin'ny tany izy ireo izay mandratra olona ambonin'izy ireo ka tokony hitandrina ianao rehefa mifindra manodidina ny efitrano. Ary farany, hametraka karazam-borona vitsivitsy ianao izay, mazava ho azy, tsy maintsy miala ianao.
fahasalamana: 2,074,850 - 4,979,640
Hanketo: Rajh mitsambikina mankany amina mpilalao iray manimba fahasimbana amin'ireo mpilalao akaiky azy rehefa lavo.
Antsoy Orb: Miantso ny orban'ny masoandro i Rajh.
Ny famelezan'ny masoandro: Fifanarahana eo anelanelan'ny 14,137 sy 15,862 / 18,378 sy 20,621 Manondro fahavalo ny fahavoazan'ny afo. Ho fanampin'izany, ity dia manaparitaka ilay mpilalao, miatrika 4,687 ka hatramin'ny 5,312 teboka fahasimban'ny afo isaky ny 3 segondra mandritra ny 15 segondra.
Tso-drano masoandro: Ny hafanana mangatsiaky ny masoandro dia mamely eo anelanelan'ny 3,237 sy 3,762 / 4,162 sy 4,837 teboka fahasimbana isaky ny segondra ary mampitombo ny fahasimbana atrehana 100%.
Rajh dia ny fanamafisana ny masoandro ary ny fihaonana farany tao amin'ny Halls of Origins.
Raha vantany vao manomboka ny ady isika, ny Rivotra Solar izay tsy inona fa ny cyclones kely mitovy amin'ny an'ny Altairus dia hiseho ao amin'ny Vortex Pinnacle amin'ny maody Heroic. Hivezivezy eraky ny efitrano ireo ary tsy maintsy mihetsika hatrany hisorohana ny fahavoazana ataon'izy ireo.
Hanandrana matetika i Rajh. Milaza aho fa hiezaka satria tsy maintsy manapaka izany raha tsy tiantsika ny hiteraka orb izay mahatratra 20,000 teboka ny fahavoazana.
Ny mpitsabo dia tsy maintsy mahatsapa ny fanoherana hatramin'ny ela, ankoatry ny fahasimbana be dia be, mamela fahasimbana avo lenta ihany izy rehefa mandeha ny fotoana. Ary koa, indraindray dia hampiasa ny finiavany hanao fahavoazana ho an'ny mpilalao rehetra izy, noho izany ilaina ny mijanona lavitra mba hampihenana ny fahavoazana.
Minitra iray aorian'ny nanombohan'ny ady dia hifindra eo afovoan'ny efitrano i Rajh ary hanipy Tso-drano masoandro. Ity tsipelina ity dia miresaka fahasimbana ara-potoana isaky ny segondra fa ny ampahany tsara indrindra dia ny fampiakarana 100% ny fahavoazan'ny mpilalao. Fotoana tokony hampiasana ny fahaizana manokana rehetra ary hamaranana miaraka amin'i Rajh.
Raha tsy vitanao ny mamono azy aorian'ny fihanaky ny vokany dia hiverina ny ady mandra-pahafatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Tranomaizina » taorian'ilay loza » Halls of Origination / Halls of Origination Originaly ary Torolàlana Ara-dalàna
Torolàlana mahery setra mahery fo sy mahery Batol
Resadresaka nifanaovana tamin'i Sylvanas, nandresy tamin'ny fifaninanana akanjo